यत्ति काम गर्दा मिर्गाैला बच्छ भने किन नगर्ने ?
वैकुण्ठ ढकाल शनिबार, माघ ११, २०७६ मा प्रकाशित
ठ्याक्कै रातको १० बजेर २४ मिनेट जाँदा यो पहिलो वाक्य लेखेको हुँ । आज विहान १० बजेर ४७ मिनेटमा कार्यालय पुग्ने वित्तिकै सहकर्मी साथीले हात मिलाउँदै बधाई दिए । कारण सोध्दा विहानै थाहा खबरमा फोटो देखेकोमा । माघ १० गते शहीद सप्ताह शुरु हुने दिन, शहीदलाई सम्झने सानो प्रयास थियो त्यो ।
१० बजेर २७ मिनेट गयो, अर्को सहकर्मीको पनि जवाफ दिनु छ, लेख्ने समय कहिले ? जवाफ यही हो । १० बजेर २९ मिनेट गयो, अबको १२ घण्टा पछि त सम्पादकले लेख खै भन्ने प्रश्न गरिहाल्छन । त्यसको जवाफ अब यसरी दिनु छ ।
शुरुमै भनौं, म डाक्डर हैन, स्वास्थ्यकर्मी पनि हैन । स्वास्थ्यको विद्यार्थी पनि हैन । लेख्न खोज्ने र सिक्ने भने पक्कै हुँ । डाक्टर भइदिएको भए, म यत्तिखेर यी पंक्तिहरु लेखिरहेने थिइन । बसाईको स्थिति पनि मिलेको छैन । ओछ्यानमा पल्टिएर तीघ्रामाथि पेटले ल्यापटप च्यापेर लेख्नु राम्रो हैन । विद्युतीय सामान निश्चित तापमान रहनु पर्ने अण्डकोशमाथि हुँदा यसले के के हानी गर्ने हो ? कतै यसले प्रजनन क्षमतामै पो असर गर्ने हो कि ? त्यही माथि शरीरको महत्वपूर्ण अंग मिर्गौलालाई पनि ल्यापटपले थिचिरहेको छ । कतै मिर्गौलाई केही भइ पो हाल्छ कि ?
जे जे भए पनि होस, आज मिर्गौलाको बारेमा केही त लेख्ने नै हो । अलिकति चलाखी पनि अपनाएको हो मैले यहाँ म कुनै स्वास्थ्यकर्मी हैन भनेर । दुई वर्ष अघि मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषिकुमार काफ्लेसँग कुराकानी पनि गरेको थिएँ, त्यो कुराकानी रेडियोमा बजाएँ पनि । कुराकानी गरेको याद छ, त्यसको रौंचिरा चाहिं याद छैन ।
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि मिर्गौलाका विरामी हुन । अहिले उनलाई हप्ताको दुई पटक डायलासिस गराइरहनु परेको छ । उनी दोस्रो पटक प्रत्यारोपणको तयारीमा छन । यसको जोखिम के कति हुन्छ ? भन्नेतिर आज जाने नै हैन ।
यो लेखाइ पछि पंक्तिकारले कम्तिमा दुई पात्रको गाली खानुपर्छ, जो यहाँ उल्लेखित हुन्छन । सामाजिक सञ्जालमा केही समय राम्रै कुराकानी भयो, व्यावसायिक जीवनका सफलता र असफलताको पनि कुरा भयो । उपचारको लागि धेरै पटक आएको कुरा पनि उनले गरेकी थिइन, तर कहिले पनि भेट भएन । माघ महिना विवाहको मौसम भएकाले प्रसङ्गबस त्यही विषय जोडिन पुग्यो । उमेर पनि सोधेकै हो, नेपालीहरुले विवाह गर्ने औसत उमेरभन्दा उनको धेरै नै थियो । कानूनले व्यवस्था गरेको भन्दा पनि धेरै नै थियो ।
रुप, रङ, ढंग सबै ठीकठाक जस्तै लाग्थ्यो, विवाहको लागि पनि उनी तयार नै रहिछन । तर विवाह नहुनुको कारण ? धेरै मेहनत पछि बल्लबल्न भन्न तयार भइन । हो उनी प्रेममा रहिछन । उनी मात्रै प्रेमी पनि विवाहका लागि तयार रहेछन, जबसम्म उनले एउटा कुरा भन्न बाँकी राखेकी रहिछन । तपाईंलाई लाग्यो होला उनले अर्को प्रेमी छ मेरो भन्छिन भनेर अहँ हैन, उनी प्रेममा निकै इमान्दार रहिछन, प्रतिवद्ध पनि । विवाहको बारेमा कुराकानी भयो प्रेमी प्रेमिकाबीच। धेरै समयदेखि भन्न बाँकी कुरा त्यही दिन भनिन ।
त्यसको लागि नी तयार थिइन । डाक्टरहरुसँग कुराकानी पछि विवाहका लागि कुनै समस्या नहुनेमा ढुक्क थिइन । प्रेमिकाले हरेक कुरा पनि आफू नियमित उपचारका लागि गइरहेको त यसै पनि प्रमीलाई थियो । उनी पिसावको संक्रमणको उपचारमा थिइन । निकै पछि मात्रै उनलाई पनि थाहा भए, अरु मानिसमा दुई वटा हुने उनको शरीरमा एउटा मात्रै रहेछ । दुई वटा हुने र नहुनेका बीचमा हुने फरकका बारेमा उनले डाक्टरसँग धेरै परामर्श पनि गरेकी थिइन । ती सबै कुराको बृतान्त सुनाएर, प्रेमी पनि पूणै रुपले तयार भए पछि उनले भनिन ‘म जन्मजात’ एउटा मिर्गौला लिएर जन्मेकी हुँ । सुन्दा प्रेमीले पनि कुनै असामान्य प्रतिक्रिया दिएन । यसले आफूलाई केही फरक पार्दैन भनेर ढुक्क पार्न कोशिस गरेको थियो । दुबै जनाको परिवारसँगको कुराकानी पनि विवाहको मिति तय गर्ने साझा निष्कर्षका साथ उनीहरु छुट्टिए ।
तर भोलिपल्ट सूर्य पुरानो दिन नयाँ उदायो । प्रेमी बटारियो, उसका बाआमालाई दोष दिएर पन्छियो । एउटा मात्रै मिर्गौला भएका पुरुषसँग विवाह गर्ने नारीहरुको फेहरिस्त सुनाउने प्रेमी एउटा मात्रै मिर्गौला भएकैले प्रेमिकासँग टाढिएको थियो । यो लेखमा तथ्यांकको कुरा गर्ने नै हैन भन्दा भन्दै पनि पुरुषको तुलनामा महिलाले मिर्गौला बढी दिएकै छन ।
के थाहा त्यो प्रेमीको पनि मिर्गौला एउटा मात्रै पो छ कि ? कुनै ठूलो समस्या नभई अस्पताल नपुग्ने आमनेपालीको प्रवृत्ति हो । यसो त मिर्गौलामै समस्या हुँदा देखिने लक्षणहरु यही हुन भन्ने पनि छैनन । यी पंक्तिहरु पढिरहँदा तपाईलाई पनि आफ्नो मृगौला दुई वटा छन कि छैनन भन्ने जाँच्न मन लाग्यो कि ? जसले कसैलाई पनि नभन्नु भनेर आफ्नो कुरा मलाई सुनाइन । मैले पनि त्यसको पालना गरेकै छु, कारण तपाईंले यी पंक्तिहरु नसुनेर पढिरहनु भएको छ ।
यी पंक्तिका लागि मैले अनुमति लिएको छैन । मेरी स्वयंसेविका भाउजू अहिले पनि हप्ताको तीन दिन शिक्षण अस्पताल डायलासिसका लागि जान्छिन । निकै विरामी परेकी भाउजूको मिर्गौलामा समस्या आएको धेरै पछि मात्रै थाहा भयो । जबकी दुबै मिर्गौला काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका रहेछन । यो अवस्थामा दुई वटा मात्रै बिकल्प हुन्छन डायलासिस वा मिगौला प्रत्यारोपण । पहिलो कुरा भाउजूलाई मिर्गौलादाता भेट्नै गारो भयो । भेटे पनि आर्थिक स्रोत जुटेन । अलिअघि त आर्थिक संकलन अभियान नै चल्यो, तर अहिले के भइरहेछ, म पनि अपडेट छैन । यत्तिचाहिं पक्का हो । दाइले स्कूल पढाएर कमाएको पैसा भाउजूको उपचारको लागि पठाइरहेका छन । विहान बेलुका पसल चलाएर आएको पैसाले पेट पालिरहेछन । तपाईं भन्नुहोला डायलासिस त सरकारले निःशुल्क गरेको छ नि ?हो म पनि मान्छु, खर्च अस्पताल भित्र मात्रै हैन, बाहिर पनि त हुन्छन नि । अस्पताल आउन जान पर्ला, विरामीले आर्थिक स्रोतले धाने पनि नधाने पनि ट्याक्सी चढ्नु प¥यो । काठमाडौंमा बसेपछि कोठा भाडा तिर्नै प¥यो । नुनदेखि नुन घोल्ने पानी पनि त किन्नु प¥यो नि ।
यी पंक्तिहरु पढिरहने कतिलाई लाग्दो हो मैले त मिर्गौला बिगार्ने काम केही गरेको छैन भन्ने लागिरहेको होला ? तर जाडो धेरै छ भनेर म जस्तैै अल्छि गरेर पिसाव लामो समय रोकेर सिरक भित्रै बसिरहनु भएको छ कि ?भारीका भारी गुट्टा किनेर खानै पर्दैन यो पनि मिर्गौला विगार्ने एउटा कारण हुन सक्छ । अनि केटीहरु मख्ख होलान हामी त पराग खाँदै खाँदैनौ हाम्रो मिर्गौला सुरक्षित छ भनेर तर मिन्स हुँदा सहनै सकिन भनेर खट्टु चपाए जसरी पेनकिलर चपाएको बिर्सनु भयो । म स्वास्थ्यकर्मी त हैन तर यत्ति त भन्नै पर्छ पेनकिलरबाट टाढै रहनु मिर्गौला बचाउने एक उपाय हो । म त कुनै पनि चिजको अम्मली हैन, छैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन ।
र नेपालीले विषादी खाइरहेछ । दाल, भात र तरकारीबाहेक केही खान्न भन्नेले पनि दिनहुँ विषादी खाइरहेछ । तरकारीको बीज, विरुवादेखि भाँडोमा ओरिनेबेलासम्म विषादीकै संसर्ग छ । पोलिस गरेर नचम्काईएको दाल र चामल भेट्नै मुस्किल । फलफूललाई चम्किलो बनाउन मात्रै हैन, पकाउन समेत केमिकल हालिएकै छ । कुखुरा छिटो हुर्काउन भनेर सुई घोपिएकै छ । माछालाई धेरै दिन टिकाउन भनेर शव नसडोस भनेर हालिने रसायन हालिएकै छ । यसर्थ कसैले दाबी गर्नै पर्देन यहाँ कसैको पनि मिर्गौला सुरक्षित छँदैछैन ।
नेपालमा रोगको बारेमा थाहा पाएर मात्रै पनि हुने अवस्था छैन । यहाँ त एउटा औषधिमा समेत कमिशनको खेल छ । उपचारका लागि पुग्ने बिरामीहरुमा कमिशन, शैयामा कमिशन, सरकारीबाट निजी अस्पतालमा लैजान कमिशन, एम्बुलेन्समा कमिशनको जमाना आएको छ । एकआधलाई छाड्ने हो भने रोगको बारेमा जानेको भनिदिंदा समेत कमिशन वा पैसा लिनुपर्छ भन्ने प्रबृति हुर्किदै गएको छ । रोग चिनेर अस्पताल पुगे पनि ढिलासुस्तीले गलत उपचारले वा यस्तै यस्तै कारणले मानिस मरिरहेका छन । रोगको पीडाले भन्दा पनि स्वास्थ्यकर्मीले, अस्पताल प्रशासनले वा चरम कर्मचारी तन्त्रले बिरामीलाई गिजोली गिजोली तन्नम बनाइन्छ । यसर्थ सुरक्षित रहन धेरैभन्दा धेरै सहज हुनु आवश्यक छ ।ल अब त घडीले रातको १२ः०८ बजायो । सबैभन्दा पहिले अघिदेखि रोकेर राखेको सुसु फ्याँकेर मिगौला जोगाउन लाग्छु ।